၁၅နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ အမေ.. |
Posted on March 16, 2010 by mamyathway
နေ့စွဲ – ၁၆.၃.၁၉၉၅
အဲ့ဒီနေ့လေးဟာ အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် နေ့တစ်နေ့။ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ရဆုံးသော၊ ကျွန်မ ဘ၀ရဲ့ လမ်းပြကြယ်၊ ကျွန်မဘ၀ရဲ့နေမင်း၊ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အားမာန်တွေကို မွေးဖွားပေးခဲ့သူ။ သူ…… ။ သူ…….။ ကျွန်မရဲ့အမေ။ ဒီနေ့ဟာ အမေကျွန်မ ကို ခွဲခွာလို့သွားတာ ၁၅နှစ် တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့။
၁၆.၃.၁၉၉၅။ အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လလောက် ပထမတစ်ကြိမ် သတိခဏလစ်သွားထဲက အမေ့မှာ နှလုံးရောဂါရှိနေမှန်း သိနေခဲ့သင့်တာ။ အမေက စိတ်မြန်တယ်။ ကျန်းမာတယ်။ တစ်အိမ်လုံးကို သူကပဲ ဦးဆောင်သူဆိုတော့ ဒီရောဂါ အမေ့မှာတွယ်ငြိနေမယ်လို့ ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့။ ဒီနောက် ပိုင်းထူးထူးခြားခြား သတိပြုမိလာတာကတော့ အမေက သူ့ကိုယ်သူ ကြိုတင်သိလို့ ပြင်ဆင်နေတာပဲလားမသိ။ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကို တဖြေးဖြေးကနေ လုံးဝရပ်လိုက်တာ။ ဘာသာရေးဘက်ကို အရင်ကထက် ပိုအာရုံစိုက်လာတာ။ အသား၊ ငါးတွေကို လုံးဝမှ မစားတော့တာ။ ပိုပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့လာတာ။ အမေထွက်ခွာမသွားခင်မှ အမေက အဲ့ဒီလိုထူးခြားနေခဲ့တာ။
အဲ့ဒီနေ့ညကတော့ ကျွန်မ အမေနဲ့အတူ အိပ်ချင်နေမိတာ။ အရွယ်ရောက်လာကထဲက ကိုယ့်အခန်းနဲ့ကိုယ်နေခဲ့ရတာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီညကလိုမျိုး အမေနဲ့ အတူအိပ်ချင်မိတာမျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်စဖူးခဲ့။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီညမှာ ကျွန်မ အမေတို့အခန်းဘက်ကူးလာပြီး အမေ့ကို အဖေနဲ့ ကျွန်မက တစ်ဖက် တစ်ချက်ရံပြီး အိပ်ခဲ့တယ်။ မအိပ်ခင် အမေ့ကို စောင်လေးခြုံပေးလိုက်တော့ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မကို အမေက ပြုံးပြလိုက်သေးတယ်။
၁၆.၃.၁၉၉၅ ရဲ့ မနက်၃း၁၅နာရီ။ ကျွန်မကို လှုပ်နှိုးလိုက်သလားအမေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က လှုပ်နိုးလိုက်သလို ကျွန်မလန့်နိုးခဲ့ရ။ ကျွန်မ အိပ်ရာ က လူးလဲထပြီး အမေ့မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေဆဲ အမေ့မျက်လုံးလေးတွေ ပွင့်လာလျှက်က ကျွန်မကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါ အမေ့ ဆီက ကျွန်မရခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအကြည့်ပါဘဲ။ အမေ့မျက်ခွံတွေ တဖြေးဖြေးပိတ်ကျသွားတယ်။အမေခွဲခွာသွားပုံက မယုံနိုင်လောက်အောင် ငြင်သာလွန်းစွာ.. သိမ်မွေ့လွန်းစွာ..။ အဖေ့ကို အမေနဲ့ ခဏထားခဲ့ပြီး အိမ်ကနေ ၁၀မိနစ်မောင်းယုံနဲ့ ရောက်နိုင်တဲ့ ဆေးခန်းကို အမေ့ဇောနဲ့ အချိန် မတော်ကြီးမှာ ဘေးခန်းက လူစိမ်းတစ်ယောက် အကူအညီနဲ့ကျွန်မ ၅မိနစ်နဲ့ အရောက်မောင်းစေခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်က အမေ့ မျက်လုံးလေး တွေကို ဖွင့်ပြီး လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလေးနဲ့ ထိုးကြည့်တော့ အဖေ့ဆီက အိကနဲ ငိုလိုက်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ဆရာဝန်က သေသေချာချာ စမ်းသပ်ပြီး ခေါင်းခါ ပြလိုက်တာကိုပဲ ကျွန်မက မယုံကြည်နိုင်။ “ ဆရာ.. နောက်တစ်ခေါက်လောက် ထပ်စမ်း ကြည့်ပေးပါဦး ” ဆိုတဲ့ စကားကို အဲ့ဒီတုန်းက ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါလောက်တောင် ကျွန်မပြောမိခဲ့လည်းမသိ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါထဲ မျက်နှာဖွက်ပြီး တသိမ့်သိမ့် ရှိုက်ငိုနေတဲ့ အဖေ့ကို ဆွဲပွေ့ပြီး နှစ်သိမ့်ပြီး ပေးနေချိန်မှာလည်း ကျွန်မက တုံဏှိဘာဝေ။ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး ထုံအသွားတာ။ မနက် အလင်းမှာ အမေ့ကို ခေါ်ယူသွားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ကား မျက်စေ့အောက်က အပျောက်မှာတော့ ကျွန်မ ခွေညွတ်ပြီး ကျန်နေ ခဲ့တော့တယ်။
ကျွန်မဟာ အမေ့သမီး။ ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်။ တွေဝေတဲ့စိတ်။ အဖြစ်မှန်ကို လက်တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင် နိုင်ရဲ ရမယ့်စိတ်တွေ အမေ့ သမီးကျွန်မဆီမှာ ဘာ ကြောင့် မရှိရမှာလည်း။ ကျွန်မ သတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်မလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှ ကျွန်မထောင့်စေ့အောင် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ဇယ်ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။
သတင်းစာကြော်ငြာထည့်၊ ကုလားဖျင်းထိုး၊ သေစာရင်းထုတ်၊ ယပ်တောင်၊ ကွာစေ့၊ နောက်ဆုံးခရီးမှာ ဝေဘို့ ပဌာန်းစာအုပ်၊ သပိတ်ပျောက်ဆွမ်း၊ အမေ့ အိကျီ င်္နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ရေမွှေးနှင်းဆီပန်းများ၊ သံယောဇဉ်အပ်ချည်ကြိုး၊ ………။ စတဲ့.. စတဲ့… အရာတွေ။ အသေးစိတ်ကအစ ကျွန်မ မမေ့လျှော့ခဲ့ပါဘူး။
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး အသက်ဓာတ်မရှိမှတော့ ဘာဆိုဘာမှ အသုံးမ၀င်တော့ဘူးဆိုတာ တရားသဘောအရ သိနေပေမယ့် အမေနှစ်သက်လွန်းတဲ့ ရေမွှေးနှင်းဆီပန်းတွေကို အမေ့နောက်ဆုံးခရီးမှာ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ခြုံလွှမ်းပေးချင်လွန်းလို့ မနက်ဈေး သုံးလေးဈေးလုံးမှာ ရှိရှိသမျှ ရေမွှေး နှင်းဆီပန်းတွေ သိမ်းကြုံးဝယ်ခဲ့မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါအမေ။ အမေက ဒီလို မယောင်ရာ ဆီလူး ကိစ္စမျိုးကို မနှစ်သက်တတ်မှန်းသိပေမယ့် အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာ သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလောက်လေးကိုတော့ အမေခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့လို့ပါ။ အမေသေပန်းပွင့်တာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မရင်ထဲ ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ နာကျင်လာမိတယ်။ အမေ့ကို ချစ်ခင်သူတွေ၊ အမေ့ကိုလေးစားသူတွေ၊ အမေ့ရဲ့ သားတပည့်တွေ၊ အမေက ထောက်ထားစာနာခဲ့သူတွေနဲ့ အမေ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီး လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းတွေကြား၊ သူတို့တွေရဲ့ သံဝေဂ လကာင်္ရွတ်သံတွေကြားထဲမှာ မျောလွင့် နေတဲ့ အမေရဲ့ ဖြူစင်ဝိညာဉ်ကို ကျွန်မ ရမ်းယောင်ရှာမိနေတယ်။ အမေ့ကို သဂြိုလ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်အထိ ကျွန်မရဲ့ မျက်ရည်တွေက အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ခမ်းခြောက်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်မအခုအချိန်အထိ အမေ့အတွက် ဘာကြောင့်များ မျက်ရည်မကျနိုင်သေးရပါလိမ့်။
ဒါပေမယ့် အမေ့ရက်လည်ပြီးလို့ ဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ကိုယ်စီပြန်ကြချိန်၊ တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အဖေနဲ့ ကျွန်မ နှစ် ယောက်ထဲ ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့မှ ကျွန်မ တဖြေးဖြေးဆွေးလာမိတာ။ အမေ့ကျောကုန်းကို ရေချိုးတိုင်း ချေးတွန်းပေးခွင့်၊ အမေရင်ခွင်ထဲက တောင်နံကတိုးရနံ့လေးကိုရှုရှိုက်ခွင့်၊ မျက်လုံးလေးမှိတ်သွားတဲ့ အထိ အမေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရယ်မောအောင် ကလိထိုးခွင့်၊ အမေကြိုက် တတ်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်၊ အမေ့အတွက် အမြဲလုပ်ပေးရတဲ့ လက်ဖက်အသားဆီစိမ်လေး ကျွန်မဒီလိုလုပ်ပေးခွင့်တွေ မရှိတော့ပါလား။ ကျွန်မကို ဘယ်သူက လိုက်ဖက်တဲ့ အိကျီ င်္တွေရွေးချယ်ပေးမှာလည်း၊ ကျွန်မနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဘယ်သူကလေ့ကျင့်ပေးမှာလည်း၊ ကျွန်မ လုံခြည်ဝတ်ရင် ဘယ်သူက ဒေါက်တည့်မတည့်ကြည့်ပေးတော့မှာလည်း၊ ……..။ …….။ ငိုတယ်။ ကျွန်မငိုမိတယ်။ ရင်ထဲက ကျဉ်ကနဲနေတဲ့အထိ၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲနစ်လာတဲ့အထိ အသံမထွက်ပဲ ကျွန်မငိုခဲ့ရတယ်။
အမေဟာ သူဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေပေါ် အခြေခံပြီး သားသမီးတွေကို ပုခုံးထမ်းတင်ပေးခဲ့သူပါ။ အမေ့ကို အမြဲသတိရပေမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဒီနေ့လို နေ့ရက်မျိုးများရောက်ရင်တော့ တကယ့်ကို ပြင်းပြင်းပျပျ သတိရနေမိပါတယ်။
အမေဟာ ခောတ်မှီတဲ့ အမေတစ်ယောက်။ ခောတ်မှီတာနဲ့ ခောတ်ဆန်တာကို ကွဲပြားသိစေခဲ့သူ။ ကျွန်မကို ယုံကြည်စိတ်တွေ ခိုင်မာလာဖို့ လမ်းပြ ပေးတဲ့ ကြယ်တစ်ဆူ။ အမေ အမွေပေးခဲ့တဲ့ ဘ၀ရဲ့ အားမာန်တွေနဲ့ သံသရာရထားကြီးကို အမေမပါဘဲ ၁၅နှစ်လုံးလုံး ကျွန်မ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခုတ်မောင်း နေခဲ့တာ။
အမေ့ရဲ့မွေးနေ့တိုင်း၊ အမေ ခွဲခွာသွားတဲ့ ဒီနေ့လိုနေ့တွေတိုင်းမှာ အမေ့အတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေ မပြတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အမေ သမီးပီသစွာနဲ့ လောကဓံကို အံတု၊ ဘ၀ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကြံ့ကြံ့ခံ လူးလားကူးခတ်နေပါတယ်။ ဒီအတွက် ရောက်ရာအရပ်ကနေ အမေ ကျွန်မ အတွက် ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အမေဖြစ်စေချင်သလို ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကျွန်မကြိုးစားသွားမှာပါ။
တကယ်တော့ အမေသေဆုံးသွားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမလွှဲမသွေ သွားရမယ့် ခရီးရှည်ကြီး တစ်ခုကို အမေကအရင် ထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါ။
၁၆.၃.၂၀၁၀ နံနက် ၂နာရီ ၂၄မိနစ်တွင် အိပ်မရပဲ အမေ့ကို သတိရလွန်းလျှက် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးမိတာပါရှင်။ အံ့သြစရာကောင်းစွာ ဒီပို့စ်လေး ရေးအပြီး နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ နံက် ၃း၁၅နာရီတိတိ ။
This entry was posted in အမေ. Bookmark the permalink.
2 Responses to ၁၅နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ အမေ..
My heart is crying … i love my mom so much, but .. after reading his post i know my mom priceless value and love her more than ever before ..thanks …
2018 ဆို 23 နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်
ဆရာမ ရေးတာ ဘယ်နှခါဖတ်ဖတ် ခံစားရပါတယ်။
1995 ဟာ ဆရာမ အတွက်အမြဲအမှတ်ယနေမှာပေါ့။
သမီးအတွက်တော့ 1995 ဟာ .—–